Ikhamera efihliweyo yeFoto yeVidiyo yeKhamera-uKhuseleko lweKhaya i-Nanny Cam (B) (SPY002) | Izisombululo ze-OMG
Ifoto ye-OMG efihliweyo Ikhamera yeVidiyo-uKhuseleko lweKhaya i-Nanny Cam (B) (SPY002)
Ikhamera yoKhuseleko engabonakaliyo: Ifihliwe kakhulu ekwakheni kwilenki ukufanisa isakhelo sezithombe njengento yokuhlobisa ikhaya, ungeke ufumane i-lens yekhamera nokuba ukhangele kuyo, enye yeekhamera ezifihlakeleyo
I-Advanced No Light Night Vision Technology: Ikhamera ine-LED emnyama engabonakaliyo kwaye ifihla eso sithembiso ubusuku obubonakalayo ukuya kwi-15 ukuya kwii-25 ezinyaweni Ubumnyama obumnyama. (I-LED ayifaki ukusetyenziswa)
I-10000mah Super Capacity Battery eyakhelwe ngaphakathi: Ukurekhoda ngobuninzi kwixesha lexesha ukuya kwii-30 iiyure kunye nobusuku bexesha lokurekhoda ukubukela kwiiyure ze-10.
ImiSebenzi emininzi yokuSebenzisa: Ukurekhoda kwe-PIR yokuhamba komzimba, Ukurekhoda ukurekhoda, Ukurekhoda kweLoop kumiselwe ukuba ubhale ngaphezulu ifayili endala kunayo entsha. (I-Loop kunye ne-audio ingavulwa okanye icime kalula njengoko ufuna)
I-720P HD Ubunjani beVideo ecacileyo:1280 * 720P kwi-30fps inkxaso kwikharityhulam ye-sd ye-micro-up to 32gb (ingabandakanyi), irekhodi ngexesha / ixesha le-watermark elungiswayo
I-Battery ye-10000mah eyakhelwe ngaphakathi: Yitsho kakuhle ukuhlawula rhoqo!
Eyakhelwe kwi-10000mah Super Battery: ukurekhoda ngesandla ngosuku lwamaxesha ukuya kwii-30 iiyure kunye nobusuku bokurekhoda okubonakalayo kwiiyure ze-10. Okwenziwe ngethuba le-PIR elibhaliweyo lirekhoda ixesha elide ukuya kwi-2 iminyaka.
Le khamera yokujonga iliso yinkxaso efanelekileyo kwinkqubo yokukhusela ekhaya, nokuba kukho ukuphazamiseka kwenkonzo yamandla kagesi.
Ixesha lokuhlawula ngokupheleleyo: malunga neeyure ze-20 nge-2A ipakitha yamandla e-USB.
I-Covert Extremely Well: Tshela kakuhle zonke iibhola okanye amehlo ...
Efihlakeleyo ekwakhiwe kwilenki ukufanisa isakhelo sezithombe njengento yokuhlobisa ikhaya, ungeke ufumane i-lens yekhamera nokuba ukhangele kuyo, efihliweyo ngaphezu kweminye ikhamera yokukhusela.
Ukulula nokusebenzayo, ukuma ngaphakathi kunye nokuxhoma umgodi, unokuvula ukuma kwayo kwaye uyibeke etafileni, unokuyixhoma eludongeni. Akunako kuphela ukusetyenziswa njengekhamera efihliweyo, kodwa kwakhona njengento yokuhlobisa ikhaya.
I-720P HD Umgangatho weVideo ecacileyo ophezulu: 1280 * 720P kwi-30fps inkxaso
Ikhadi le-SD le-SD ukuya kwi-32gb (ingabandakanyi),
Umsindo unokuvulwa okanye uvaliwe naliphi na ixesha ukukhusela ngasese ngexesha lokurekhoda
Rekhoda nge-watermark yamanqaku / ixesha.
Phawula: Ikhamera ayisebenzi ngaphandle kwekhadi le-microdd elifakiwe, kufuneka uthenge ngokuhlukileyo ngaphambi kokusetyenziswa.
Ingenayo imbonakalo engcono kakhulu ebomini kwintsimi ye-1mm lens, kunye nobuchwepheshe be-LED ye-Black, ikhamera ayenzi naluphi na ukukhanya okubonakalayo ebusuku xa isebenza.
Umbono wokwenyani ebusuku: ukuthelekisa iimveliso ezifanayo kumbono womsebenzi wobusuku, kunokusebenza kwimeko yonke emnyama.
Ingxelo yevidiyo ye-PIR Motion Detection: malunga ne-1 imfutshane kwifayile nganye
Rekhoda ngokuqhubekayo: malunga ne-10 iminithi nganye kwifayile
Ukurekhoda kwe-Loop: akukho mfuneko yokukhathazeka ngeememori khadi iza kuzaliswa, izakufaka ngokuzenzekelayo iifayile ezidala kunayo entsha, nceda zikhuphe iifayile ezibalulekileyo ngexesha elifanelekileyo.
I-SPY002 - Ifowuni yeChoto Frame Hidden Footage
12115 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-24 Namhlanje